“Harry Kane waa gooldhaliye aad u wanaagsan, laakiin waxaan heystaa labo asaga la mid ah” – Tababare Solskjær – Gool FM
“Harry Kane waa gooldhaliye aad u wanaagsan, laakiin waxaan heystaa labo asaga la mid ah” – Tababare Solskjær
(Manchester) 11 Jan 2019.Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa shaaca ka qaaday in Red Devils ay xiiseeneyso lasoo saxiixashada Mauricio Pochettino.
kooxda Manchester United ayaa Axada soo aadan marti ugu noqon doonto Tottenham Hotspur Wembley Stadium si ay u wada ciyaaraan kulankooda 22-aad xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
Shabakada “Sky Sports” ayaa waxay soo xigatay wareysi uu tababare Ole Gunnar Solskjær bixiyay kahor kulanka Tottenham Hotspur wuxuuna yiri:
“Pochettino wuxuu shaqo fiican ka qabanayaa kooxda Tottenham Hotspur, taasi waa sababta loola xiriirinayo kooxda Manchester United”.
“Harry Kane waa gooldhaliye aad u wanaagsan, waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay weeraryahanada ugu muhiimsan xiligan caalamka, laakiin anigana waxaan heystaa labo asaga la mid ah, waana ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo”.
“Laakiin dabcan Harry Kane waa ciyaaryahan heer sarre ah iyo weerar yahan fantastik ah”.
“Harry Kane marna ma lumiyo fursadaha goolka hortiisa ah, sidaasi darted waa inaan ka hortagnaa inuu helo fursadaha uu nagu sameyn karo”.
“Kulan kasta waxaan mareynaa tijaabo cusub, balse markan shaki kuma jiro inaan la ciyaareyno koox heer sare ah, hadii aan dooneyno inaan ka guuleysano Tottenham, waa inaan si fiican u shaqeynaa oo aan ka warqabnaa halka ay ka xoogan yihiin”.
“Bilaawashadiisa way iga fiican tahay aniga” – Guardiola oo amaan kala dul dhacay tababare Solskjær